विकासको सारथी – MeroJilla.com
समाजमा हुने अवान्छित गतिबिधि रोक्न बेरोजगारको अन्त्य गर्नुपर्दछ उपाध्यक्ष कुवर
काँग्रेसले जितेको स्थानीय तहमा कर बढाउन नदिने :कोइराला
नेबि सघको कार्यकाल तीन महिना थपियो
कानुन निमार्ण गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी नबनौं , ‘सांसदले विधि निमार्ण गर्ने हो, फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउने होइन’: अध्यक्ष तिमिल्सिना
राष्ट्रगान लेखक व्याकुल माइलाको ‘त्यो साइकल’-दिपेन्द्र राई
केरलामा बाढी र पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ३ सय २४ पुग्यो
सरकारको गतिविधिमा अधिनायकवादको छाया“ देखियो’
बागलुङमा शालिग्राम संग्रालय बन्दै, अब दश हजार शालिग्राम एकै ठाँउमा
मधेसमा ओलीको राजनीतिक यात्रा
नेपाली जनसम्पर्क समिति स्पेन ले १०४ औं बीपि कप खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता गर्ने !!!
प्रजातन्त्रको किरणले नेपाली भूमि रापिँदै थियो । १ सय ४ वर्षे निरंशकुशताबाट मुक्त भएर मुलुकले नवबिहानीलाई स्वागत गरेसँगै विकासको मूल रसाउन थाल्यो । माछापुच्छ«ेको काख अनि फेवाको छातीमा टाँसिएको पोखराले विकास भिœयायो विमानबाट । ६५ वर्ष अघि अर्थात विसं २००८ मा पोखरेली जमीनमा विमान ओर्लियो । १६ औं सताब्दीमा काठमाडौं उपत्यकाबाट आएका नेवार र १८ औं सताब्दीमा मुस्ताङबाट झरेका थकाली समुदायले पोखरामा थालेको व्यापार व्यवसाय फस्टाउन थाल्यो ।
सै व्यवसाय फस्टायो, समस्या पनि आउने नै भए । अहिलेको जस्तो बाटोघाटो र सञ्चारको त कल्पना पनि थिएन । २००८ पुस १ । आधुनिक पोखराको प्रगतिपथ शिलान्यास भयो । ३३ जना व्यापारीको भेलाले टेकबहादुर ढेवाजु सभापति रहने गरी समिति गठन ग¥यो । नामकरण गरियो पोखरा व्यापार संघ । श्यामप्रसाद कर्माचार्य, प्रेमराज मुल्मी, अमृतप्रसाद शेरचन, दानबहादुर शेरचन र पूर्णलाल कायस्थ समितिमा थिए ।
व्यापारीको संघ भए पनि उद्देश्य थियो,‘गरिब, मजदुर, किसान र व्यापारीको स्तर उचो राख्ने र बाटोघाटो पुल आदि बनाउन विशेष प्रयास गर्ने ।’ अग्रज पत्रकार तीलकमान गुभाजु भन्छन्,‘नामले यो व्यापारीको संघ जस्तो देखिए पनि यसका संस्थापक र सञ्चालकमा निहीत सामाजिक काम गर्ने अभिरुचि र संघको माध्यमबाटै समाजमा केही गरेर देखाउँ भन्ने पवित्र भावनाले यसको उचाइ चुलिएको छ ।’
भारतबाट कोटाको सामान आयात गरी संघले स्थानीय बजारमा बिक्री थाले पनि कानुनको अभावमा दर्ता हुन सकेको थिएन । २४ माघ २०११ मा नदीपुरमा भएको भेलाले पोखरा व्यापार संघलाई विधिवत दर्ता गरी सञ्चालनको निर्णय ग¥यो । दर्ताको व्यवस्था मिलाउने टोलीको जिम्मा पाएका थिए सर्वज्ञमान प्रधानांगले । २६ माघमा अमृतप्रसाद शेरचन नेतृत्वमा ९ सदस्यीय अस्थायी समिति गठन भयो । सचिव मथुराप्रसाद बजिमय र कोषाध्यक्ष सर्वज्ञमान प्रधानांग थिए । चित्रबहादुर तुलाचन, जगदीशप्रसाद गौचन, कृष्णबहादुर जोशी, दीलबहादुर भारी, समरबहादुर बजिमय, अमृतमान बिजुक्छे सदस्य थिए । समिति गठन भएको १ वर्षपछि अनंगमान शेरचनको पहलमा संघ दर्ता भयो पोखराकै पहिलो संस्थाको रुपमा । पोखरामा व्यावसायिक गतिविधि बढ्दै गयो । उद्योगहरु स्थापना भए । सबैको प्यारो र न्यानो माया दिने अभिभावक भएकाले संघले आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने महसुस ग¥यो । उद्योगहरुलाई पनि समेट्ने हिसाबले संघ, २०३३ सालमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा रुपान्तरित भयो ।
व्यापारी वर्गबाट स्थापित संस्थाले शैशव अवस्थादेखि नै समाज सेवा र विकासमा चासो दिइरह्यो । विकासको सारथी बनिरह्यो । २००७ सालको क्रान्तिमा होमिएका अमृतप्रसाद शेरचन संघको अध्यक्ष भएकाले नैे संस्थाले विकासका निम्ति अगुवाइको मौका पाएको हो । पोखरामै जन्मेहुर्केका कवि तीर्थ श्रेष्ठ भन्छन्,‘त्यो क्रान्तिमा भाग लिएको पुस्ता पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा हुँदा संस्थामै क्रान्तिकारी चेत आयो । त्यतिबेला न चुनाव भएको थियो, न नगरपालिका बनेको थियो । जनताका प्रतिनिधि भएका निकाय थिएनन् । क्रान्तिकालीन पुस्ता पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा भयो, त्यसैले नै पोखराको विकासका लागि तत्परता लिन थाल्यो । पोखराका निम्ति सपना देख्ने संस्था बन्यो ।’
बागलुङ र बन्दीपुरले आर्थिक शक्तिकेन्द्र बनिरहँदा पोखरामा औलोको डर थियो । राणाहरु पाल्पा खेदिँदा र प्रशासनिक निकायका सबैजसो काम उतैबाट हुने भएकाले पोखरा छायाँमा नै थियो । विसं १९५८ मै नेपाल राजकीय संस्कृत पाठशाला स्थापना भए पनि शैक्षिक चेतनाको दृष्टिले कास्की खासै चर्चामा थिएन । २००७ सालको परिवर्तनले जन्माएको राजनीतिक चेतनापछि मात्र यहाँको शैक्षिक विकासले गतिलिन थाल्यो । भर्खरै स्थापित पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सो अभियानको संवाहक बन्न पुग्यो । पोखराका पुराना सबैजसो शैक्षिक संस्था स्थापना र सञ्चालनमा संघले नेतृत्व लिएको छ ।
संघ आफै शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्दैैन । पोखरालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिको व्यावसायिक थलो बनाउन जुटिरह्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन, ‘राणाकाललगत्तै प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक, पञ्चायतकालमा क्याम्पस र बहुदलपछि विश्वविद्यालय खोल्न संघले देखाएको तत्परता र आर्थिक सहयोगको तुलना सायदै हुन्छ ।’ संघले २०२५ सालमा गैह्रपाटनमा ४४ हात मोहडाको जग्गा १३ हजार रुपैयाँमा खरिद ग¥यो । त्यही वर्ष नदीपुरमा बालमन्दिर बनाउन संघले १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्चियो । यसबाट पनि पोखराका उद्योग व्यवसायीको शिक्षाप्रतिको लगाव प्रस्ट्याउँछ । संघका संस्थापक अध्यक्ष शेरचनले राजा महेन्द्रको इच्छा अनुसार पृथ्वीनारायण क्याम्पस भवन बनाउने ठेक्का पाए । उनले क्याम्पसको पहिलो भवन बनाए । त्यो ठेक्काको पैसा नपाएपछि शेरचनले काठमाडौं इन्द्रचोकको घरै बेच्नुपरेको थियो ।
पोखरालाई भैरहवा र काठमाडौंसँग जोड्ने दुईवटा राजमार्ग चाहिन्छ भनेर सपना देख्ने स्वप्नद्रष्टा हो पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणका लागि तत्कालीन राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण नेपालीलाई आह्वान गरे । त्यसले पनि संघको ध्यान तान्यो । राजमार्ग नसकिएसम्म प्रति वर्ष १ हजार १ रुपैयाँ चन्दा दिने प्रस्ताव संघले ग¥यो । ३ वर्ष यो सहयोग निरन्तर रह्यो । राजमार्ग बनाउन छिमेकी मित्रराष्ट्रले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि चन्दा रोकिएको थियो ।
महेन्द्रपुल, काहुँडाँडामा भ्यु टावर निर्माणमा संघले नै अगुवाइ ग¥यो । तत्कालीन अवस्थामा क्षेत्रीय योजना आयोगको समीक्षालय र पोखरा सभागृह मात्र नभएर महेन्द्रपुल निर्माणका लागि समेत संघले नेतृत्व लियो । यही अगुवाइको निरन्तरता संघले अहिले पनि दिइरहेको छ । प्रदेश नम्बर ४ कै विकासको मूल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि संघले लिएको अगुवाइ कसैबाट छिपेको छैन । झन्डै ३ महिना लामो रिले अनसन, पोखरा र राजधानीमा पटक पटक दबाब दिन पछि हटेन संघ । व्यवसायीको वर्गीय हित मात्रै नहेरेर संघ किन सामाजिक सेवामा लागेको ? संघ अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे भन्छन्,‘हाम्रा अग्रजले नै यसको थालनी गर्नुभएको हो । पोखराको समग्र विकासको लागि हामी चुप्प लागेर बस्न सक्दैनौं ।’
डेढ दसकभन्दा बढी स्थानीय तहको निर्वाचित प्रतिनिधि विहीन रहे । हरेक २ वर्षमा अधिवेशन हुने संघप्रति पोखरेलीको असाध्यै भरोसा छ । फुटपाथबाट पसल हटाउनेदेखि होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थापनमा पोखरेलीको साथ र सहयोग लिएर संघले सफलता पाएको छ । पोखरालाईसोलार सिटी बनाउन चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारसँग समन्वय भयो । विजयपुरदेखि हल्लनचोक मात्र हैन सहरका अन्य भागमा समेत सोलार लाइटले पोखरा झलमल भएको छ । अध्यक्ष पालिखेले भने, ‘नेपाल र चीन दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएको ६०औं वर्षगाँठको अवसरमा तिब्बत सरकारकोतर्फबाट प्राप्त सहयोग उल्लेखनीय छ ।’
पोखराको खानेपानी आयोजना सुदृढीकरण, यहाँको बाटोघाटो र निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायसँग समन्वय गरी वृहत्तर विकासमा लाग्न संघले खाका तयार गरिसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । तत्कालीन पोखरा उपमहानगर अहिले पोखरा–लेखनाथ महानगर बनिसकेको छ । यो अवस्थामा पनि संघले आफ्नो भूमिकालाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
सहरको क्षेत्र विस्तारले मात्र हुँदैन । यसका लागि चाहिने पूर्वाधार तयार हुनु जरुरी छ । चाक्ला सडक, व्यवस्थित बसपार्क, नियन्त्रित बस्ती विकास, भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा स्थानीय निकायले चासो दिनुपर्ने अध्यक्ष पालिखे बताउँछन् । यसबाहेक पोखरा–काठमाडौं रेलमार्ग, पोखरालाई महेन्द्र राजमार्गसँग जोड्ने बाटो, वृहत्तर चक्रपथ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल पोखराले मागेको छ । शिलान्यास भइसकेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त यो क्षेत्रको समृद्धिद्वार नै हो । वर्गीय हित मात्र नभएर समग्र विकासमा पोखरा उद्योग वाणिज्यसंघले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । यसैको निरन्तरताका क्रममा संघले राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला गर्दै आएको छ । व्यापारिक जमघट मात्र नभएर यसको आम्दानी संघले सामाजिक क्षेत्रमा समेत खर्चिंदै आएको छ । यो पटकको मेलाको आम्दानीबाट संघले पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा अत्याधुनिक डोम बनाउने लक्ष्य राखेको छ । मेला भब्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न हुनुको साथै अपेक्षा अनुसार नै सफल भएको कोषाध्यक्ष पवन प्रजापति बताउँछन् ।-samadhan
राष्ट्रगान लेखक व्याकुल माइलाको ‘त्यो साइकल’-दिपेन्द्र राई	Saturday, August 18th, 2018
चुरे संरक्षण र नदी नियन्त्रण आजको आवश्यकता	Wednesday, August 15th, 2018
हामिले देख्न नसकिएको जापानमा भविष्य र अपनाउन नसकिएको यथार्थ -रोजिन थापा मगर	Thursday, August 9th, 2018
छोरा ! तिम्रो बाबा तिम्रा सपना सहित चाहन पुरा गर्न विदेशी भएको हो !	Wednesday, August 8th, 2018
दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालीको भूमिका	Monday, August 6th, 2018
स्तनपान नगराउँदा बालबालिकामा समस्या	Wednesday, August 1st, 2018
समाजमा हुने अवान्छित गतिबिधि रोक्न बेरोजगारको अन्त्य गर्नुपर्दछ उपाध्यक्ष कुवर August 18, 2018
काँग्रेसले जितेको स्थानीय तहमा कर बढाउन नदिने :कोइराला August 18, 2018
नेबि सघको कार्यकाल तीन महिना थपियो August 18, 2018
कानुन निमार्ण गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी नबनौं , ‘सांसदले विधि निमार्ण गर्ने हो, फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउने होइन’: अध्यक्ष तिमिल्सिना August 18, 2018
राष्ट्रगान लेखक व्याकुल माइलाको ‘त्यो साइकल’-दिपेन्द्र राई August 18, 2018
केरलामा बाढी र पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ३ सय २४ पुग्यो August 18, 2018
सरकारको गतिविधिमा अधिनायकवादको छाया“ देखियो’ August 18, 2018
बागलुङमा शालिग्राम संग्रालय बन्दै, अब दश हजार शालिग्राम एकै ठाँउमा August 18, 2018
मधेसमा ओलीको राजनीतिक यात्रा August 18, 2018
नेपाली जनसम्पर्क समिति स्पेन ले १०४ औं बीपि कप खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता गर्ने !!! August 18, 2018
अबदेखि सबै अदालतले वेबसाइटमा फैसलाको विवरण अनिवार्य August 17, 2018
पर्वतःवेबसाइट नियमित रुपमा अपडेट हुदैनन् । August 17, 2018
‘बाटुलेचौर, देविस्थान मन्दिर,ठुलो पोखरीको पर्यटन प्रस्ताव तयार हुदैछ’–राजेन्द्र पौडेल । August 17, 2018
तीजमा वहिनी माईत आउँदिन भने पछि राजन कार्कीलाई ठुलो चिन्ता August 17, 2018
किन अचानक वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री वनाउन खोजियो August 17, 2018
स्वर्गीय जननायक बीपि कोईरालाको १०४औं पुण्य स्मृति दिबसका अवसरमा नेपाली जन सम्पर्क समिती स्पेनले नेपाली नेपाली बीच खेलको माध्यम बाट मेलमिलाप, आपसी सदभाब कायम गराउने उद्देश्यले स्पेनमा स्थापनाकालदेखी.....
“जसस बेल्जियमले सम्झियो संबिधानका पिता स्व: शुशिल कोईराललाई”
बेल्जियम- नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमले संबिधानका पिता स्वर्गीय शुसिल कोईराला को ७९ जन्म जयन्ती मनाउँदै.....
स्विट्जल्याण्डमा हरितालिका तीज तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुने
स्विट्जरल्याण्ड । गैर आवासीय नेपाली संघ, महिला फोरम स्विट्जरल्याण्डको आयोजनामा हरितालिका तीज तथा अन्तरक्रिया.....
बिरोध ज्ञापनपत्रले एनआरएनएको इतिहासमै खैलाबैला
स्विटजरल्याण्ड । गैर आवासीय नेपाली संघ लक्जम्बर्गले आयोजना गरेको ११ औ युरोप बैठक तथा ९ औ महिला बैठकमा धेरै कमि.....
नेपाल सरकारको काम कारबाही प्रति ज स स फ्रान्सको आपत्ति
फ़्रान्स । नेपाली जनसम्पर्क समिती फ़्रान्सले सरकारको पछिल्लो कामकारबाही र शासकीय दम्भको भर्त्सना गर्दै नेपाली.....
शिवाकोटीको छोरीको जन्मदिनमा छोरी उपहार
बार्सिलोना । युरोप को बार्सिलोना जस्तो अत्यन्तै ब्यस्त शहरमा रहेर पनि आफ्नो कला संस्कृतिलाई जोगाई राख्नको लागी.....
देशदेखि विदेश सम्म पत्रकारीता फैलाउन नेपालका पत्रकारद्धारा अन्तराष्ट्रय पत्रकार संघ गठन ।
काठमाडौं । उमेरले जान्ने बुझने भएदेखि नेपालहुदैं विदेशका विभिन्न देशहरुमा रहेर समेत पत्रकारीतलाई निरन्तरता.....
एनआरएनको आप्रवास समस्या समाधान उपसमितिको पहिलो बैठक सम्पन्न
स्पेन । गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएन ) को आप्रवास समस्या समाधान उपसमितिको पहिलो.....
नेपाली जनसंपर्क समितिको “विश्व सन्जाल’’ गठन
विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउन विष्णु सुवेदीको अध्यक्षतामा नेपाली.....
ओली सरकारको निरङ्कुशतन्त्रको बिरुद्ध मा ज स स जर्मनीको भर्त्सना
प्रेस बिज्ञप्ति नेपाली जनसम्पर्क समिति जर्मनी नेपाल तरुणदल केन्द्रीय अध्यक्ष जितजङ बस्नेत र धेरै तरुण दलका.....